Sendinblue vs Mailchimp – Suuqgeynta iimaylka marka la barbar dhigo | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Sendinblue vs Mailchimp - Suuqgeynta iimaylka marka la barbar dhigo
Sendinblue vs Mailchimp - Suuqgeynta iimaylka marka la barbar dhigo
Waxaa laga yaabaa 4, 2020
Maqaalkan dib u eegista waxaan ku barbardhigi doonaa Sendinblue vs Mailchimp - laba suuqgeyn email oo caan ah iyo aalado suuqgeyneed.
Dhaqan ahaan, Sendinblue iyo Mailchimp labaduba waxay bilaabeen suuqgeyn email ahaan qalab, oo si tartiib tartiib ah u xuubsiibtey suuqgeyn dhamaystiran dhufto ee.
Maanta, labadan gooboodba waxay leeyihiin sifooyin kala duwan oo ay ku jiraan automation marketing, bartilmaameed habdhaqan iyo maaraynta xidhiidhka macaamiisha (CRM).
Waxaa intaa dheer, waxay sidoo kale taageeraan kanaalo badan marka laga reebo iimaylka; oo ay ku jiraan xayeysiisyada dhijitaalka ah, boggaga degista, suuq-geynta SMS-ka iyo wada-sheekeysiga shabakada.
Si aad uga faa'iidaysato maqaalkan, waxaanu ka soo qaadanay sifooyinka ugu muhiimsan Sendinblue iyo Mailchimp, waxaanan u kala qaybinay lix qaybood oo kala duwan. Intaa waxa dheer, waxaanu iftiiminay faraqa u dhexeeya Sendinblue vs Mailchimp mid kasta oo ka mid ah qaybahan.
Maamulka liiska iimaylka: Habkan habaysan waxa uu ka hadlayaa sifooyinka maamulka liiska madal kasta sida qaybinta, profile profiles iyo awoodaha CRM.
Awoodda suuqgeynta: Halkan waxaan kaga hadlaynaa awoodaha iswada iyo shaqsiyaynta ee goob kasta, sida beegsiga habdhaqanka, shakhsiyaynta, iyo diritaanka wakhtga wanajinta.
Kanaalada suuq geynta: Qaabkan qaabaysan, waxaanu is barbar dhig ku samaynaa kanaalada marka laga reebo iimaylka laga heli karo goob kasta. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah xayeysiisyada dhijitaalka ah ee lacagta lagu bixiyo, suuq-geynta SMS-ka, wada-sheekeysiga website-ka iyo kaararka boostada.
Warbixin, falanqayn iyo aragtiyo: Qaybtani waxa ay ka hadlaysaa xulashooyinka warbixinta kala duwan ee laga heli karo goob kasta sida imayl-ku-dhufashada/qiimaha furan, tirakoobka gudbinta, iyo tirada dadka dhagaystayaasha ah. Waxa kale oo ay iftiiminaysaa xog-ururin xog-ururineed iyo talooyinka ololaha kuwaas oo u gaar ah Mailchimp.
Qalab dheeri ah: Halkan waxaan kaga hadlaynaa dhowr qalab oo aan si adag ula xiriirin suuqgeynta iimaylka ama automation marketing. Waxaa ka mid ah software-ka maamulka warbaahinta bulshada, qalabka maaraynta nuxurka iyo dhisaha mareegaha.
Qiimaha: Ugu dambayntii, waxaanu ka wada hadalnay qaababka qiimaha ee labada goobood oo aanu wadaagno talo ku salaysan baahida isticmaalaha.
Tilmaamaha Maamulka Liiska Emailka
Labada Sendinblue iyo Mailchimp waxay soo bandhigaan qaab fantastik ah oo aasaasi ah iyo kuwa horumarsan ee liiska maamulka ee qorshahooda xorta ah. Sendinblue wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto tiro aan xadidnayn oo liisaska iimaylka ah.
Mailchimp si kala duwan ayuu ula dhaqmaa liisaska iimaylka. Waa loo yaqaan Maqalka. Dhageystayaashu waxay yeelan karaan qaybo badan waxayna u dhaqmaan ku dhawaad ​​la mid ah liiska iimaylka. Si kastaba ha ahaatee, Mailchimp waxay bixisaa 1, 3 iyo 5 dhagayste oo keliya Free, Essentials iyo Standard qorshayaasha. Ku Premium qorshuhu wuxuu leeyahay dhagaystayaal aan xadidnayn.
Farqiga aasaasiga ah ee u dhexeeya Sendinblue iyo Mailchimp waa in Sendinblue, xiriirka liisaska badan lagu tiriyaa. mar keliya. Halka Mailchimp, lagala xiriiro liisas badan (dhagaystayaasha) waa la tiriyaa dhowr jeer.
Si kale haddii loo dhigo, haddii aad xiriir isku mid ah ku leedahay saddex liis oo email oo kala duwan, Sendinblue waxay u tirin doontaa mid, Mailchimp-na wuxuu ku tirin doonaa saddex. Tani ma khasaare u yeelo isticmaalayaasha Mailchimp maadaama hal dhagayste uu yeelan karo qaybo badan.
Qaybinta Dhageystayaasha iyo Tags
Marka la eego qaybta, Sendinblue iyo Mailchimp labaduba waxay bixiyaan awoodaha qaybinta cajiibka ah oo ku salaysan liiska guryaha iyo shuruudaha kale. Tusaale ahaan, waad ku dari kartaa beeraha caadadii sida Lambarka Telefoonka or Iibka Koowaad liiskaaga oo samee dhagaystayaal kala qaybsan taas oo ku salaysan taas.
Mailchimp wuxuu u qaybin karaa liisaska ku salaysan xogta macmiilaha (sida goobta, macmiilka iimaylka), hawlaha ololaha (dabeecada iswada, iimaylka furmay), saadaasha tirakoobka (kala duwanaanshaha da'da iyo jinsiga) iyo dhacdooyinka gaarka ah (app iyo hawlaha shabakada).
Sendinblue waxay taageertaa qaybinta ku salaysan hawsha iimaylka, iyo xogta dhacdada gaarka ah. Waxaad kaydin kartaa xidhiidho badan oo intaad rabto, iyo sidoo kale tiro aan xadidnayn oo dhacdooyin iyo astaamo ah (tags ayaa soo socda dhawaan).
Tags gudaha Mailchimp: Mailchimp wuxuu bixiyaa hanti dheeraad ah oo loo yaqaan tags. Waxaad ku meelayn kartaa calaamado xiriiriyahaaga oo waxaad abuuri kartaa ololeyaal si heer sare ah loo bartilmaameedsaday adoo isticmaalaya calaamado iyo goobo khaas ah.
Tags lagama heli karo Sendinblue, si kastaba ha ahaatee, waxaad si fudud u isticmaali kartaa hab-dhaqan. Waxaad abuuri kartaa goob gaar ah oo la yiraahdo Tags liiska iimaylkaaga oo isticmaal hantida AND marka aad dhisayso dhagaystayaashaada.
Qaadashada habka macmiilka-caadiga ah ee ugu horreeya ayaa muhiim u ah guusha ganacsiga B2C. Taasi waa sababta aaladaha suuqgeynta AIO sida Sendinblue iyo Mailchimp ay u leeyihiin sifooyin CRM ku dhex dhisan sida profile profiles, kaas oo ah bog gaar ah oo loogu talagalay qof kasta oo la xidhiidha akoonkaaga. Waxaad ku xidhi kartaa labada Sendinblue iyo Mailchimp qalabkaaga CRM ee ganacsigaaga si loo helo isgaarsiin suuqgeyneed oo wanaagsan.
Mailchimp wuxuu u daaweeyaa liisaska iimaylka sidii dhegaystayaal wuxuuna ku kooban yahay 1, 3, 5 ama dhegaystayaal aan xadidnayn.
Mailchimp waxa ay tixgelisaa wadarta xidhiidhka (aan ahayn) tirada xidhiidhka halka Sendinblue ay tixgeliso tirada xidhiidhka gaarka ah.
Mailchimp wuxuu bixiyaa kala-qaybin wax yar ka wanaagsan sida tirakoobka la saadaaliyay ee qorshooyinka mushaharka sare leh.
Automation-ka suuq-geynta ee ay ku shaqeyso fariimaha gaarka ah iyo bartilmaameedka habdhaqanka waxay u samayn kartaa yaabab ganacsi. Labada Sendinblue iyo Mailchimp waxay taageeraan shaqsiyaynta iyadoo la adeegsanayo sumadaha isku-dhafka ah iyo beegsiga habdhaqanka sareeyo. Aan eegno:
Automation Marketing Mailchimp
Awoodaha iswada ee Mailchimp waxa loo qaybin karaa afar qaybood oo waaweyn:
Automation-ka aasaasiga ah: Iimayl soo dhawoow, otomaatig ku salaysan xogta sida maalmaha dhalashada ama sannad-guurada.
RSS-to-email automation kuwaas oo aad ka abuuri karto wargeysyo toos ah oo ka socda quudinta RSS.
E-ganacsiga Automation sida iimaylada gaadhiga ee la dayacay, talooyinka alaabta, ogaysiisyada dalbashada, iibka kowaad iyo iimaylada ka-qaybgalka ee macaamiisha daacadda ah iyo kuwa aan firfircoonaynba (xusuus - tani waxa kaliya oo ay heli karaan macaamiisha, iyo xaaladaha qaarkood waxa laga yaabaa inay u baahdaan iimaylka premium transactional addon).
Automation ku salaysan dhacdada: Waxaad diri kartaa mareegaha iyo abka xogta is dhexgalka (sida Soo galay or Heerarka La Dhamaystiray) Ku dir Mailchimp oo u soo dir fariimo toos ah oo ku salaysan hab-dhaqanka isticmaale
Automation Marketing Sendinblue
Sendinblue sidoo kale waxay taageertaa otomaatigyada suuqgeynta iimaylka ee la mid ah Mailchimp sida farriimaha soo dhaweynta, dhaqdhaqaaqa e-ganacsiga, dhaqdhaqaaqa macaamilka, iwm. Laakiin farqiga ugu weyn ayaa ah inaadan u baahnayn inaad lacag dheeraad ah ku bixiso si aad u isticmaasho sifadan Sendinblue - mar hore ayaa lagu soo daray.
Waxa Sendinblue ka soocaya waa iyada dhise socodka shaqada ee caadiga ah. Sendinblue's caadadii dhisaha qulqulka shaqadu wuxuu kaa caawinayaa inaad iimaylka u dirto isticmaalayaasha sameeya waxqabadyo taxane ah oo horay loo sii qeexay. Tusaale ahaan, waxaad abuuri kartaa socodka shaqada kaas oo isticmaale (ka ku jira liiskaaga xiriirka) uu booqdo bogga wax soo saarka SaaS, fiiri bogga qiimaha ka dibna ka baxa bogga internetka. Dhamaadka socodka shaqada, iimaylka ka-qaybgalka (sida webinar video ama demo badeecad) ayaa loo diraa isticmaalaha.
Sendinblue sidoo kale waa ay taageertaa dhibcaha hogaanka Kaas oo ah hab si firfircooni leh loogu cusboonaysiiyo tayada hoggaankaaga iyadoo lagu salaynayo hab-dhaqankooda. Tusaale ahaan, haddii xiriirigu furo iimaylkaaga soo dhawaynta ah, waxaad ku meelayn kartaa +10 dhibcood xidhiidhkaas. Haddi xiriiri sameeyo wax gadasho, ku qor +50 dhibcood,maadaama isaga/iyada ay u badan tahay inay mar kale iibsadaan.
Mailchimp waxa ay taageertaa dhacdooyinka abka ee Sendinblue aanu bixin.
Sendinblue waxa ay leedahay hab-dhise shaqo oo caado u ah oo waxa ay bixisaa dhibcaha rasaasta taas oo Mailchimp aanu lahayn.
Labada gooboodba waxay sidoo kale bixiyaan hagaajinta wakhtiga dirida halkaas oo iimayllada lagu soo diro sanduuqa gelinta isticmaalaha iyadoo lagu saleynayo marka isaga/isaga ay u badan tahay inay furto iimaylka.
Dunida omnichannel-ka ee maanta, macaamiisha waxaa lagula xiriiri karaa iimaylka, SMS, Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, ogeysiisyada riixa (mobile iyo web) iyo xayeysiisyada la beegsaday. (Miyaa aan xiisay?)
Xidhiidhka macmiilku kuma koobna iimaylka oo keliya waana kan sida Sendinblue iyo Mailchimp u qaadanayaan.
Gudaha Mailchimp, waxaad kula xiriiri kartaa macaamiishaada:
Bogagga soo dhicidda
Xayeysiisyada warbaahinta bulshada ee Facebook iyo Instagram
Dib u habeynta xayeysiisyada Google, Facebook iyo Instagram
Dhageystayaal u eg: Mailchimp wuxuu kaloo kuu ogolaanayaa inaad u abuurto daawadayaal u eg xayaysiisyada bulshada iyo ololaheeda kaararka boostada. Tusaale ahaan haddii aanad faylka ku haysan ciwaanka macmiilka, Mailchimp ayaa tixraaci doona xogta xogta oo ku dhejin doonta kaadhka magacaaga. Waxaad isticmaali kartaa daawadayaasha u eg si aad u abuurto ololeyaal aad loo beegsaday.
Marka la barbardhigo, Sendinblue wuxuu kuu oggolaanayaa inaad la xiriirto macaamiishaada:
Wada sheekaysiga shabakada
Xayeysiisyada warbaahinta bulshada ee Facebook
Dib u habaynta xayaysiisyada AdRoll
Sendinblue waxa uu ku siinayaa dashboard midaysan kaas oo aad ka maamuli karto dhammaan xidhiidhka macaamiishaada.
Sendinblue waxa ay bixisa SMS iyo website ku sheekeysiga sida kanaalo suuqgeyneed oo dheeri ah, halka Mailchimp ay bixiso kaarar muuqaal ah.
Mailchimp waxa uu bixiyaa xayaysiis waxyar ka wanaagsan iyo daawadayaal u eg.
Haddii ay dhacdo macaamiisha isweydaarsiga lacagahaSendinblue waxay ku bixisaa isla qorshe, halka Mailchimp uu kaaga baahan yahay inaad iibsato adeeg dheeraad ah oo la yiraahdo Mandrill.
Warbixinta, Falanqaynta & Aragtida
Marka la eego warbixinta iyo falanqaynta, labadaba Sendinblue iyo Mailchimp waxay bixiyaan cabbiro muhiim ah sida heerka furan iimaylka, CTR (riix-riix), liiska hoos u dhigista (tirada ka bixista) iyo warbixinnada gaarsiinta si ay kaaga caawiyaan inaad cabbirto waxqabadka ololaha. Waxa kale oo aad helaysaa macluumaad dheeraad ah sida goobaha ugu sarreeya, ilaha kobaca iyo wax badan oo ku jira qorshooyinka lacag bixinta.
Mailchimp waxa kale oo ay bixisaa bar-tilmaameedka ololaha, kaas oo awood kuu siinaya in aad barbar dhigto waxqabadka ololahaaga bartilmaameedyada warshadaha. Marka la eego macaamiisheeda ballaaran ee Mailchimp, tani waa ilo xogeed la isku halayn karo oo tilmaami doonta haddii ololeyaashaadu ay dhaafaan waxqabadyada ama waxqabadkoodu hooseeyo.
Haddii aad ku xidho dukaankaaga onlaynka ah Mailchimp, sifo lagu magacaabo Qiimaha Nolosha Macmiilka (CLV) ayaa loo qoondeeyey xidhiidh kasta. Waxaad u isticmaali kartaa macluumaadkan si aad u abuurto ololeyaal dib-u-ka-qaybgal oo aad loo beegsaday.
Qalab dheeraad ah
Kuwa soo socda ayaa ah dhowr astaamood oo suuqgeyn iimaylka ah oo horumarin kara waxqabadka ololaha iyo saxnaanta cabbirka.
plugin rasmi ah: Waxaad ku rakiban kartaa oo isticmaali kartaa plugin-ka rasmiga ah ee Sendinblue warside ka dashboardkaaga WordPress. MailChimp ma bixiso plugin ay leeyihiin oo rasmi ah, marka waa inaad ku tiirsato soosaarayaasha plugin dhinac saddexaad si ay si sahlan ula dhexgalaan WordPress.
Mawduucyada emaylka: Labada gooboodba waxay bixiyaan habab email ah oo horay loo dhisay, beddelaad-habboon oo ujeeddooyin olole oo kala duwan ah (sida waxbarid, wargelin, farxad, iwm.).
Imtixaanka A / B: Sendinblue waxay ku bixisaa imtixaanka A/B ee qorshaheeda lacag bixinta ah si la mid ah Mailchimp.
Mailchimp waxa kale oo ay ku bixisaa imtixaano kala duwan oo qorshaheeda Premium ah (wax aanu Sendinblue lahayn).
Is dhexgalka dhinacyada saddexaad: Mailchimp waxay taageertaa is dhexgalka dhinac saddexaad oo ka badan Sendinblue, laakiin aaladaha/meelaha ugu caansan waxaa taageera labada goobood.
Aaladaha soo socda si toos ah ulama xidhiidhin suuq-geynta iimaylka, laakiin waxay bixiyaan faa'iido badan haddii aad u tixgelinayso mid kasta oo xal ah inuu noqdo goob suuq-geyneed.
Bogagga soo dajinta: Mailchimp wuxuu ku bixiyaa lacag la'aan, Sendinblue waxay tan ku bixisaa qorshaheeda lacagta ah.
Mareeg dhise: Waxa kaliya oo ay bixiso Mailchimp bilaash, oo ay ku jirto taageerada domainka gaarka ah.
Maamulka warbaahinta bulshada: Mailchimp wuxuu bixiyaa agab bilaash ah oo loogu talagalay dhajinta warbaahinta bulshada iyo jadwalka boostada (Facebook, Instagram iyo Twitter), iyo maamulka xayeysiiska lacag bixinta ee xayeysiisyada Facebook iyo Xayeysiiska Instgram.
Mailchimp wuxuu kaloo bixiyaa a istuudiyaha maadada Kaas oo asal ahaan u ah aaladda maareynta hantida dhijitaalka ah ee goobtaada. Marka lagu daro aaladda warbaahinta bulshada, tani waxay noqonaysaa iskudhaf awood leh oo lagu maamulayo joogitaankaaga warbaahinta bulshada si toos ah dashboardkaaga Mailchimp.
Sendinblue vs Mailchimp - Isbarbardhigga Qiimaha
Hadda dhinaca ugu muhiimsan - moodooyinka qiimaha ay bixiyaan labada goobood. Halkan waxaa ah qoraal kooban:
Mailchimp biilasha adiga oo ku saleysan tirada guud ee xiriirka iyo tirada iimayllada la soo diray.
Sendinblue biilasha adiga ku saleysan kaliya tirada iimaylada la soo diray. Waxaad yeelan kartaa xiriir aan xadidneyn.
Guudmarka Qiimaha Mailchimp & Falanqaynta
Qorshaha xorta ah ee Mailchimp waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee guusha uu ka cararay. Waxaad helaysaa agab suuqgeyn iimaylo horumarsan sida otomaatig hal-tallaabo ah (emaillo soo dhawayn leh, gaadhiga la dayacay), beegsiga habdhaqanka, kala qaybinta iyo sumadaha, moodellada iimaylka bilaashka ah, boggaga degista, dhisaha degelka ee leh taageerada domainka gaarka ah, maamulka warbaahinta bulshada (dhejinta organic iyo xayaysiisyada) iyo studio content. Waxaad ku xaddidan tahay 2,000 oo xidhiidh ah iyo 10,000 iimaylo/bishii. Waxaad sidoo kale ku xaddidan tahay hal dhegeystayaal, laakiin waxaad abuuri kartaa qaybo badan.
Tirada Xidhiidhka ee Mailchimp vs Price Conundrum
Isla ka dib qorshaha xorta ah waa marka arrimuhu bilaabaan inay xiiso yeeshaan. Qiimaha lagu muujiyay sawirka kore waa 500 oo xiriir. qiimuhu wuu kordhaa marka tirada dadka lala xidhiidhayo ay korodho.
Tusaale ahaan, Qorshaha Halbeegga ah ee Mailchimp waxa uu ka bilaabmaa $14.99/mo 500 oo xidhiidh oo ku kooban 50,000 iimaylo/mo iyo $189/mo 20,000 oo xidhiidh ah oo lagu xidhay 240,000 email bishii.
Marka la barbardhigo, Sendinblue qorshihiisa ugu qaalisan oo dhan sifooyin, xidhiidho aan xadidnayn iyo 300,000 iimaylo/moi waxay ku kacayaan $173/bishii.
Halkan waxaa ah dulmar guud oo ku saabsan qorshooyinka lacag bixinta ee Mailchimp:
Mailchimp Aasaaska: Qorshahan waxaa ku jira dhammaan 3-da dhegaystayaal, moodellada iimaylka, waxay taageertaa tijaabada A/B iyo calaamadaynta caadada, waxay meesha ka saaraysaa Mailchimp footer, iyo 24×7 iimaylka iyo taageerada wada sheekaysiga. Tirada guud ee iimaylada la soo diro bishii waa 10 jeer tirada xidhiidhkaaga, oo ku koobnayd 500,000 iimaylo/biil.
Heerka Mailchimp: Qorshahan waxa ku jira 5 dhegaystayaal, aragtiyo dhegaystayaal horumarsan oo ay ku jiraan qiimaha nolosha macmiilka (LTV), dib-u-habaynta xayeysiisyada, moodellada iimaylka ee gaarka ah, taxanayaal, jadwalka boostada ee warbaahinta bulshada (sida Buffer), dirida wanaajinta wakhtiga, gaadhsiinta aagga wakhtiga iyo caadada talaabooyinka badan. socodka shaqada oo ay ku jiraan automation ku salaysan dhacdada. Xadka dirida iimaylka ee bilaha ahi waa 12 jeer wadarta tirada xidhiidhkaaga, oo lagu koobay 1.2M iimaylo/bishii. Ikhtiyaarada taageerada waxay la mid yihiin qorshaha Aasaaska.
Mailchimp Premium: Qorshahan waxa ku jira qayb sare, imtixaano kala duwan, dhegaystayaal aan xadidnayn iyo taageero telefoon. Xadka dirida iimaylka ee bilaha ahi waa 15 jeer wadarta tirada xidhiidhkaaga, oo ku koobnayd 1.2M iimaylo/bishii.
Si aad u hesho dulmar faahfaahsan oo ku saabsan sifooyinka Mailchimp iyo qorshayaasha, booqo shabakadooda.
Guudmarka Qiimaha Sendinblue & Falanqaynta
Qaybtani waxay soo bandhigaysaa falanqaynta qorshayaasha suuqgeynta iimaylka ee kala duwan oo ay bixiso Sendinblue laga bilaabo Janaayo 2020. Waxaan isku dayay inaan qaybtan u hayo sida kooban ee suurtogalka ah, anigoon meesha ka saarin wax macluumaad ah oo muhiim ah. Qorshe kasta waxa ku jira qodob ka sooca qorshihii hore. Ka fakar waxa aad ku helayso lacagta dheeraadka ah ee aad bixiso. Halkan waxaa ah soo koobid degdeg ah mid kasta oo ka mid ah qorshayaasha qiimaha Sendinblue ee hadda:
Sendinblue's Qorshaha lacag la'aanta ah waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo dirto ilaa 300 emails/maalintii. Waxaad geli kartaa ku dhawaad ​​dhammaan astaamaha suuqgeynta iimaylka oo ay ku jiraan moodellada iimaylka, wada sheekaysiga degelka, automation-ka suuq-geynta (oo ay ku jiraan dhisaha socodka shaqada) iyo suuq-geynta SMS. Tilmaamaha aan lagu darin waa xayeysiisyada, boggaga degitaanka iyo wada sheekaysiga shabakada.
The Qorshaha Lite Waxay si fudud meesha uga saaraysaa xadka dirida maalinlaha ah waxayna taageertaa ilaa 40,000 email bishiiba. Sifooyin kale oo dheeri ah lama bixiyo.
The Qorshaha muhiimka ah waxay ka saartaa calaamadda Sendinblue, waxay soo bandhigtaa tirakoobyo warbixineed oo horumarsan oo ay ku jirto taageerada telefoonka. Mar labaad, ma jiraan astaamo kale oo dheeraad ah oo la bixiyay.
The Qorshaha lacagta koowaad waxaa ku jira sifo kasta oo Sendinblue ay tahay inay bixiso, waxayna soo diri kartaa ilaa 300,000 email bishii. Astaamaha aan la furin waxaa ka mid ah xayeysiisyada, boggaga degista, Tijaabada A/B, hagaajinta wakhtiga dirida iyo taageerada isticmaalayaasha badan (saddexda hore ayaa lagu daray, iyo $12/ isticmaale dheeraad ah). Xulashooyinka taageerada ee lagu bixiyo Muhiimka ah iyo Premium qorshayaashu waa isku mid.
The Qorshaha ganacsiga waxaa ku jira taageero go'an, oo ay la socoto dhammaan sifooyinka kale. Waa inaad sidoo kale heshaa qiimo dhimis mug leh haddii aad leedahay baahi iimaylka oo aad u sareysa.
Duubista - Qaabkee la dooranayaa
Doorashada goob suuqgeyneed waxay ku xiran tahay kiiska isticmaalka iyo arrimo kale oo taageeraya. Halkan waxaa ah laba siyaabood oo loo isticmaalo:
blog: Sendinblue waxay macno badan u samayn doontaa blog-ka maadaama ay u badan tahay inaad haysato liis iimaylo oo weyn oo laga yaabo inaad u baahato inaad dirto tiro badan oo iimaylo ah/bishii. Sendinblue aad ayuu uga jaban yahay.
Waxaa la yaab leh, xadka iimaylka ee qorshaha bilaashka ah ee Mailchimp (10,000 iimaylo/mo) waxyar ayuu ka sarreeyaa qorshaha xorta ah ee Sendinblue (9,000 iimaylo/mo). Si kastaba ha ahaatee Sendinblue waxay bixisaa xiriir aan xadidneyn gudaha oo dhan qorshaheeda.
Bakhaarka internetka: Dukaanka khadka tooska ah, kobcinta iyo la falgalka dhagaystayaashaada ayaa fure u ah guusha. Waxa kale oo aad yar tahay inaad haysato liis aad u sarreeya (marka la barbar dhigo wargeyska blog-ka). Xaaladdan oo kale, waxaan dooran lahaa Mailchimp maadaama ay bixiso qalab ka wanaagsan qorshaheeda Heerka, sida dib u habeynta xayeysiiska, macaamiisha LTV iyo in ka badan.
Si kastaba ha ahaatee, marka uu bakhaarkeygu korayo, (tusaale cabbirka liisku wuu koraa) Waxaan samayn lahaa falanqayn kharash vs-faa'iido ee Mailchimp vs Sendinblue oo ku salaysan cabbirka liiskayga, tirada iimaylka ee bishii la soo diro iyo sifooyin gaar ah oo la isticmaalo. Haddii Sendinblue ay noqoto mid si weyn uga jaban, waan beddeli lahaa.
Adiga - maxaad u malaynaysaa qoraalkan isbarbardhigga ah? Ma jiraan wax aad jeclaan lahayd inaad ku darto? Waa maxay doorashadaada goob suuqgeyneed? Sendinblue ama Mailchimp? Noogu sheeg faallooyinka hoose!
Noocyada Xisaabinta Cloud - Hage Ballaaran oo ku saabsan Xalka Cloud iyo Teknolojiyada 2021
17 siyaabood oo PPC ay uga caawin karto ganacsigaaga inuu ka badbaado qalalaasaha dhaqaale